Deg Deg : Dhinacyadii ku dagaalamay Xeraale oo la kala qaaday | Hobyo Media Online
Deg Deg : Dhinacyadii ku dagaalamay Xeraale oo la kala qaaday
Tan iyo markii dhawaan ay dagaaladu ka dheceen deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud waxaa soconayay dadaalo iyo waan waan nabadeed oo la doonayay in lagu joojiyo xabadda si loo joojiyo dhiiga dadka shacabka ah.
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo deegaankaasi ayaa sheegaya in haatan lagu guuleystay in la kala qaado dhinacyadii dagaalamay, islamarkaana xabad joojin la kala dhexdhigay kuwaasi oo haatan dhamaantoodi laga saaray goobihii ay ku dagaalameen.
C/laahi Cabdi Xareed oo kamid ah Guddi nabadeed oo kusugan deegaanka oo ay kujiraan waxgarad, culimaa’udiin iyo qeybaha bulshada ayaa sheegey in loo balansanyahay in wejiga xiga la wada fariisto, loona kala dab qaado labada dhinac.
“Waan ku guuleysanaya in aan xabad joojin kala dhex dhigno, haatan xaaladda deegaanku waa ay degantahay, ciidamaduna waa lakala qaaday muddooyinkanba waan wadnay dadaaladaasi nabadeed”, Ayuu YiriC/laahi Cabdi Xareed.
Dagaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka Xeraale ayaa waxaa uu sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, ayadoo durba laga soo saaray baaqyo nabadeed, oo loo jeediyaya dhinacyadii dagaalamay, madaxweynaha Dowladda Federaalak Soomaaliya mudane Max’ed C/laahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegey in Guddi xaqiiqo raadin ah loo diri doono deegaanka Xeraale.
Xigasho :Wakaalada Wararka Qaranka Soomaliyeed ee Sonna